स्वास्थ्य क्षेत्रबारे मन्त्री थापासँगकाे अन्तरक्रिया (भिडियो हेर्नुहोस्) - Naya Patrika
स्वास्थ्य क्षेत्रबारे मन्त्री थापासँगकाे अन्तरक्रिया (भिडियो हेर्नुहोस्)
नयाँ पत्रिका | पुष १५, २०७३
नेपाली राजनीतिका आशालाग्दा युवानेता हुन् गगन थापा । थापाजस्ता युवालाई स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा पाउनु देशका लागि पनि अवसर हो । तर, देशको अवसर र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न पक्कै पनि चुनौती छन्, यो तथ्य सबैभन्दा बढी गगन थापाले बुझेको हुनुपर्छ । देशको राजनीतिक व्यवस्था र आफ्नै पार्टी कांग्रेसको पद्धति र नीतिबारे सबैभन्दा प्रखर रूपमा बोल्ने नेता गगन थापा हुन् । तर, विद्रोह बोल्नु र जिम्मेवारी पूरा गर्नुमा के फरक छ ? मन्त्री भएपछि गगन थापाको बुझाइ के छ ? यस विषयमा छलफल गर्न मन्त्री थापालाई हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकको न्युजरुममा आमन्त्रण गरेका थियौँ । मन्त्री थापा र नयाँ पत्रिकाकर्मीबीचको अन्तरक्रिया बिहीबार साँझ फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण गरिएको थियो । दर्शकले पनि मन्त्रीलाई सीधा प्रश्न सोधेका थिए ।
अन्तरक्रियाको पुरा भिडियो हेर्नका लागि तलको तस्बिरमा थिच्नुहोस्>>>>